Ziziphi iimpazamo eziqhelekileyo kunye ne-A9 Search Engine Optimization?
Ingabonakala ngathi ayikho i-brainer, kodwa abathengisi bee-ecommerce banokufumana oko kanye abakudingayo-kuphela xa uluhlu lwemveliso yakho luqulethe yonke imigaqo yokukhangela ehambelana nxamnye nombuzo wokukhangela ozaliswe ngumthengi onokuthenga. Kodwa kunikezwa ukuba isabelo seengonyama sendlela yokucwangciswa kwegama eliphambili sisebenza ngokulinganayo, i-A9 Search Engine Optimization yama-Amazon inendlela eyahlukileyo kule nkqubo. Kwaye kuthetha ukuba kukho ezininzi iimpazamo ezenzeka ngokuphindaphindiweyo abaninzi abathengisi bakwa-Amazon abasengakwazi. Yingakho ngaphantsi ndiza kucacisa loo mfihlelo malunga ne-A9 Search Engine Optimization, kwaye ndikubonise imivalo eqhelekileyo, ngokuhambelana neempembelelo eziphindaphindiweyo ezenziwa ngabahwebi abaninzi be-intanethi abathengisa iimveliso zabo kuloo ndawo yemarike - computer programming companies in lebanon. Ngoko, makhe sicinge!
I-A9 ye-A9 yoKhenketho lweeNjini zokuSebenza
Into into yokuba abaninzi abathengisi kwi-Amazon bakholelwa ukuba Icandelo elibuyiselayo lohlu lwazo lwemveliso equle ezinye zazo eziphambili ezijoliswe kuyo (okwenyanelwanga ukufumana indawo yabo kwisihloko somkhiqizo, okanye kwicandelo lokuchaza) yimihlaba ebalulekileyo ebalulekileyo ye-A9 Search Engine Optimization. Kwaye bonke bayangalunganga. Ngaloo ndlela, ukuba ufuna ukwenza okugqithisiweyo kwigama lakho eliphambili lokubhala uluhlu lwemveliso yakho, nansi indlela efanelekileyo yokuphucula iphepha lakho lomkhiqizo (kwinqanaba lokubaluleka kokubaluleka):
1) Isihloko somkhiqizo;
2) Uludwe lweeBlue Points;
3) Ukubuyisela imigqaliselo yokuPhendla;
4) Inkcazelo yeMveliso.
Iphutha ezimbini: Ukubeka yonke into kwindawo enye
Ndiyathetha apha ukuba phakathi kweephostiki eziqhelekileyo kunye ne-A9 Search Engine Optimization yimeko eqhelekileyo xa umthengisi ebeka isabelo seengonyama kujoliswe kuyo amagama angundoqo - nje kwindawo enye, endaweni yokuhlukanisa yonke into ibe yimigca emihlanu. Kuthetha ukuba akukho mfuneko yokunika bonke abalinganiswa abangama-250 kwintsimi enye, kungakhathaliseki ukuba ubaluleka kangakanani.
Yingakho ugxininiso kumgca omnye kuphela kuthetha ukuba uchitha inxalenye ye-80% yamagama angundoqo asele.
Intsimbi yesithathu: Ukusebenzisa amagama afanayo ngokuphindaphindiweyo
Ngokwe-Amazon, akukho mfuneko yokuphinda nayiphi na inxalenye yomxholo wakho, sele sele ifunyenwe nakwezinye iimbonakalo zoluhlu lwakho lwemveliso. Kuthetha ukuba naluphi na uhlobo olusetyenzisiweyo lwezinto eziphambili ezijoliswe kuyo-ayikho nto kodwa ukuchitha loo ndawo enexabiso. Emva kwakho konke, ukuphatha uluhlu lwemveliso yakho ukulungiswa kwemveliso ngendlela echanileyo kunye nobulumko kuya kushiya umnyango ovulekile ukufumana inombolo enkulu okanye idibene kunye nokubeka amagama angundoqo ukuze uzuze. Ngokucacileyo, konke okufunekayo apha kukukhankanya igama elilodwa eliphambili elijoliswe kuyo ngokukodwa (oko kuya kuba ngokwaneleyo, ngokuqinisekileyo), kwaye uqhubeke ngokukhululekile ukuzalisa amacandelo alandelayo ephepha lakho lemveliso elifuna ukulungiswa kwamanye amagama athile ngokuchanekileyo.